अमेरिकामा दीनदुखी | manka kura
« घलेगाउंको वांकिअंश
घले गाउं »
नेपालमा वसेर अमेरिकावारे हामीले साचेको धेरै कुरा सत्य नहुन सक्छ । अमेरिका धनी देश भएकोले त्यहां वस्ने सवै जना सम्पन्न र धनी होलान्, गरिव कोही छैनन् , माग्ने कोही छैनन् ,सवैसंग गाडी होलान्, सवैका अग्लाअग्ला घर होलान् , चोरीचकारी नहोला वा सवर्त्र शान्ति होला भन्ने लाग्न सक्छ अमेरिका पुगेर हेर्दा भने त्यस्तो भेटिन्न । धनी, गरिववीच खाडल अझ ठूलो छ । कानुन र न्याय निसाफप्रति भने अधिकांशको विश्वास छ ।
अमेरिका पुगेपछि सुरूका दिनमा देखेका दृश्य पत्याउनै नसकिने रहेछन् । म वसेको एरिजोना राज्यको टुसान महानगरको डाउनटाउन वसपार्कमा वस कुरेर वस्दा कति मानिस वस चढ्न पैसा भएन भन्दै एक क्वार्टर ( एक सुका ) माग्दै हिंड्ने युवा र प्रैाढहरू संधैजसो देखिन्छन् । वसपार्क वा अन्यत्र रहेका फोहरर फाल्ने वाकसमा कोकका सिसी, क्यानमा रहेको झोल वा अरूले खाएर फालेका खानेकुरा झिकेर खाएको पनि देखिन्छ । कृपया एउटा चुरोट पाउं भन्दै चुरोट माग्नेहरू पनि थुपै् देखिन्छन् । अरूले खाएर फालेका लामा, छोटा चुरोटहरू टिपेर धक नमानी अानन्दले सल्काएर तानेको पनि देखिन्छ । अझ चुरोट अम्मलीहरूले फालिएका ठुटा चुरोट वटुल्दै सुर्ती झारेर पेपरमा रोल गरेर खाएको पनि देखिन्छ । अमेरिकामा पेपरमा सुर्ती भरेर चुरोट वनाएर खाने चलन पनि निकै छ । थोरै पैसा हुनेहरूले गार्वेज वक्सामा अरूले प्रयोग गरी फालेका कपमा फाउन्टेन डि्ड०क , पेप्सी कोक अादि भरेर खानेहरू पनि देखिन्छन् । स्टोरकै कपमा फाउन्टेन डिड०क खांदा र अाफ्रनो कपमा रिफिल गरेर मात्र खांदा पैसा निकै कम लाग्ने भएकोले पनि यसो गर्छन् ।
एकदिनको कुरो हो । म अाफै वेलुकाको सिफ्ट सकाउनुअघि स्टोरभित्रको फेोहर फाल्न गएको थिएं । दुवै हातमा ठुला प्लास्टिक व्याग लिएर स्टेारवाहिर अलि पर रहको कन्टेनरमा फाल्न खोज्दा कन्टेनरभित्र वसेको मानिस चिच्यायो। त्यो वेला मेरो सातो गएको थियो । सांझको सुनसान र सुरूका दिनमा त्यस्तो हुंदा म झसंग भएको थिए । कन्टेनरभित्र कोही रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि यसो हेरेको त, नेपालमा केटाकेटी कन्टेनरभित्र फोहोर खोज्न वसेझै पाको मानिस वसेको देखें । उसले त्यहां फालिएको केक, मासुका टुक्रा वटुलेको देखे । त्यस्तो देख्दा त्यो दिन मलार्इ अचम्मै लाग्यो । पछिपछि यस्ता दृश्यहरू पटकपटक देख्नपाइएको थियो ।
अरूसंग पैसा माग्दै हिंडने, घर नभएर पार्क र सडकछाप जीवन विताउनेलार्इ होमलेस भनिन्छ । कसैलार्इ पनि माग्ने भनिदोरहेनछ । माग्ने शव्द निकै घटिया मानिदों रहेछ । स्टोरवाहिर वा ’round यसो छेकिएर स्टोरवाट फर्कनेहरूसंग वा ग्यास हाल्न अाउनेहरूसंग चानचुन पैसा पाउं भन्दै हात पसारिरहेका हुन्छन् । त्यसरी मागेको पैसाले कोक, वियर किनेर खान्छन् । यहां स्टोर म्यानेजर वा मालिकको स्वीकृतिविना कसैले पनि स्टोरअगाडि वा उसको एरियाभित्र वसेर पैसा माग्न पाइंदैन । त्यसरी मागेको देखे तुरून्त पुलिसलार्इ खवर गरिन्छ । पुलिसले उसलार्इ ग्राहकसंग पैसा नमाग्न चेतावनी दिन्छ । स्टोर एरियाभित्र टेक्नै नपाइने गरी चेतावनी पनि दिनसक्छ । नमाने स्टोरवाहिर मागेवापत पुलिसले जेलसमेत हाल्नसक्छ । यस्तो घटना मेरै स्टोरमा पनि घटेको थियो । व्यवसाय गर्नेहरूलार्इ राज्यले धेरै हदसम्म सुरक्षा र ग्यारेन्टी दिएजस्तो लाग्छ । यस्ता काम गर्नेमा वढी काला जाति नै देखिन्छन्र ।
विभिन्न संस्थाले सहयोग उठाउन काउन्टरअगाडि राखिदिएको वाकसमा मानिसहरूले सामान किनेर वेचेको चानचुन पैसा हालेर सहयोग पनि गर्छन् । त्यस्तो वाकस कुन सट्रकामा उठाएर लगेको घटना म अाफैले भोगेको छु । प्राय सवै स्टोरको काउन्टरमा एउटा कचैारा जस्तो भांडो हुन्छ । त्यसमा सामान किन्दा अाएको चानचुन पैसा धेरैजसोले त्यसैमा राखिदिन्छन् । अर्को व्यक्तिलार्इ अावश्यक पर्दा चानचुन पैसा नपुग्दा त्यहीवाट झिकेर तिर्ने प्रचलन सामान्य मानिन्छ ।
संसारलार्इ हैकम चलाउने अमेरिकामा नागरिकको यस्तो दिनचर्या देख्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविकै हो । होमलेसले खुला अाकाशमै जीवन व्यतीत गर्छन् । दिनभरि त यिनले (विहान ६ वजेवाट वेलुका १० वजेसम्म वस्न पाइने ) पार्कहरूका सियालमा विताउंछन् । रात परेपछि उनीहरू सडकका पुलमुनि, सान्ता क्रुज रिभरको पुलमुनि, रूखका झ्रयाड०हरूमा वा मानिसले झटृ नदेख्ने ठाउंहरूमा वसेर रात विताउंछन् । सांझ परेपछि चराचुरूंगी वासस्थान फर्केझै यहां वुढावुढी, वयस्क यस्तै स्थान खोज्दै कुम्लो पिठ्रयुंमा वोकेर हिडेका देखिन्छन्र । अोछ्याउने वा अोढ्ने रग, कम्वल भने. प्रायले वाकेका हुन्छन् । कतिपयले विभिन्न स्टोरका ग्रोसरी कार्ट ( स्टोरवाट सामान किन्दा घर कोठासम्म पुराउने गाडी ) मा खाने सुत्ने सामान राखेर गुडाउंदै हिंड्छन् । कतिचाहिं साइकलमै अोढ्ने अोच्छ्याउने, झिटीगुन्टा वोकेर डुलिरहेका देखिन्छन् । ज्यादा गर्मी र ज्यादै ठन्डीको समय होमलेसहरू स्टोरमा अाएकादेखिएन । सोवारे वुझ्रदा त्यस्तो वेला तिनीहरूलार्इ सेनाले लगेर तिनको खानपानको व्यवस्था गरेको अखवारमा पढ्न पाइएको थियो ।
होमलेसहरू म भोकै छु खान देउ, वचाउ, चोरेर खानुभन्दा मागेर खानु राम्रो, हातले प्लेकार्डमा लेखेर पुलिसको अाखा छल्दै ट्राफिक लाइट रहेको चैावाटोमा रोकिएका गाडीवालासंग पैसा मागिरहेका देखिन्छ ।
म वसेको अपार्टमेन्टको पूर्वतर्फ सान्ताक्रुज नदी छ । त्यसैको वगलमा सेन्ट मेरिजन रोडको देव्रेतर्फ भारतीयले संचालन गरेको सेल( ग्यास, प्रोपिन अादि वेच्ने ) स्टोर छ । एक जना नेपाली दाजु गोविन्द श्रेस्ठ त्यहां काम गर्नुहुन्थ्यो । वेलुका अर्को नेपाली साथीले काम गर्थे । म फुर्सद हुंदा प्राय विहान त्यहा पुग्थे । त्यहां जांदा सान्ताकुज पुल पार गरेर जानुपर्छ । मूलवाटोवाट पार्कतिर जाने वाटोको छेवैमा रहेको मानिस वस्नसम्म हुने गरी वनाइएको पर्खालमा एक जना सेतै फुलेकी वुढीअामाले केही रात त्यही पर्खालमा सुतेर विताएको देख्छु । विहान घामसंगै उठेर तिनी अाफना पोका पन्तरावाट काइयो निकालेर कपाल कोरिरहेकी हुन्थिन् । यस्तै अरू कतिले खोलाका तीर र पुलमुनि रात विताएको देखिन्थ्यो । विहान ६ वज्नासाथ कति चांहि पोकोपन्तरो वोकेर पार्कका शितल छहारीमुनि अाएर पल्टेका देखिन्थे ।मेरी अामासमान वुढीले सडकको छेउमा पर्खालमाथि रात विताएका दृश्य देख्दा मन दुख्थ्यो । अाखा रिसला हुन्थे । यो देख्दा भने वुढावुढीको जिन्दगी थोरै भए पनि नेपालमै राम्रो जस्तो लाग्थ्यो । अमेरिकामा वुढावुढीको जिन्दगी वाह् छोरा तेह् नाति , वुढाको धेाक्रो कांधैमाथि भन्ने नेपाली उखानसंग मिल्दोजुल्दो छ । अमेरिकामा वुढावुढीले प्राय एक्लो जीवन विताइरहेका देखिन्छन् । १८ वर्ष पुगेपछि वावु अामासंग वस्नुलार्इ लाछीपन मानिन्छ । तिनीहरू १८ वर्ष पुगेपछि अाफै काम खोज्दै छुटिृएरै वस्न रूचाउंछन् । व्वाइफ्रेन्ड , गर्लफ्रेन्डसाथ अलग्गै वस्न रूचाउंछन् । वावु अामासंग विशेष समयमा मात्र घेटघाट हुने गर्छ वा नजिक भए वावु खुवाउने वेला र अामा खुवाउने वेलामा भने भेटघाट गर्छन् ।
हामीसंगै स्टोरमा काम गर्ने अन्दाजी ६२ वर्ष ा पार गरिसकेकी क्यारोल वुढी थिइन् । तीनी काममा ज्यादै अनुभवी थिइन् । सुरूका दिनमा संगै काम गर्ने सिफ्टपर्दा तिनीवाट निकै काम सिक्न पाइएको । थियो । नेपालीलाइ असाध्यै माया गर्थिन्र । खाजा संधै वांडेर खान्थिन्र । यसरी वांडेर खाने चलन अरूमा देखिन्न । तिनको एउटै मात्र छोरो थियो । उ अामासंग नवसी त्यही सहरको अर्को ठाउंमा वस्थ्यो । अामा भने अपार्टमेन्टको भाडा तिर्न गाह्रो हुने भएकोले अाफूजस्तै अर्को साथी खोजेर एउटा कोठामा वस्थिन् । उनीहरू यस्तै संस्कारमा हुर्केकाले होला , छोरा त्यसरी वसेकोमा त्यति चिन्ता भने गर्थि नन् । अाफनै खुटृामा उभिएर कसैको सहाराको अाशा नगरी वांच्ने चलन यहां देखिन्छ । म भन्दा पुराना साथीले उनीलाइ हाम्रो देशको रीतिरिवाजवारे धेरै कुरा भनेका रहेछन् । त्यसैले उनी नेपालीको एक पति, एकपत्नी र हजुवादेखि नातिसम्म एउटै घरमा वस्ने चलन राम्रो भन्थिन् ।
नेपाल र अमेरिकाको एउटा कुरा भने ठ्याक्कै उल्टो पाए । हामीकहां ससाना उमेरका केटाकेटी सहरमा ज्यादा वरालिएर मगन्ते ,वेसहारा भएर सडक र गल्लीमा जीवन विताइरहेका देखिन्छन् । त्यसको ठीक उल्टो अमेरिकामा प्राय वुढा वा अधवैंसेहरू मात्र सडकछाप जिन्दगी विताइरेका देखिन्छन् । केटाकेटी १८ वर्ष नपुगुन्जेल अभिभावकले लालनपालन, िशक्षादी क्षा दिने जिम्मेवारी अभिभावकको हुने भएकाले केटाकेटीहरू सडकछाप जिन्दगी विताएको देखिंदैन । घरवारविहीन वुढावुढी प्राय विहान ग्रोसरी कार्ट गुडाउंदै वा प्लास्टिकका ठूला व्याग वोकेर विएर र कोकका क्यान कन्टेनरवाट फलामे सुइराले वटुल्दै हिंडेका देखिन्छन् । कतिले चांहि देशअनुसारको भेष भनेझै निसान गाडी लिएर स्टोरवाहिर रहेका गार्वेज वक्सहरूवाट प्लास्टिक वोतल, गोल्डेनट्वाक कागज अादि वटुल्दै गाडीमा तह लगार्इ मिलाएर राख्दै हिंडेका पनि देखिन्थे ।
This entry was posted on नोभेम्बर 30, 2011 at 7:52 बेलुका and is filed under वर्गविहीन.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “अमेरिकामा दीनदुखी”
NePali player Says:
जुलाई 1, 2012 मा 4:12 बिहान | जवाफ फर्काउनुहोस्
I normally don’t like to comment, but your article on Living in Arizona State made me feel disrespectful if I don’t sayaword after reading it. Really good article , keep it up .